ရန်ကုန်ရေကြီးခြင်းဘေးမှကာကွယ်ရန်အကြံပြုစာစင်ကာပူမှ မြန်မာဘူမိပညာရှင်တဦး ရေးထားတာ - How To Renovate Our Drainage System Post Detail | Razzwire
ရန်ကုန်ရေကြီးခြင်းဘေးမှကာကွယ်ရန်အကြံပြုစာစင်ကာပူမှ မြန်မာဘူမိပညာရှင်တဦး ရေးထားတာ - How To Renovate Our Drainage System
ကျွန်တော် စဉ်းစား မိတာက ရိုးရိုးလေးပါ ၊ စဉ်းစားမိတာလေး တခုကိုသူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူတဦးတယောက်ကိုမှ အပြစ်ပြောလိုစိတ်၊ ဝေဖန်လိုစိတ် မရှိပါဘူး ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြို့တမြို့ကို ရောက်တိုင်း မြို့အ၀င်မှာ ၊ ကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးတဲ့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ မှာဆိုရင် လွိုင်ကော်မြို့မှ ကြိုဆိုပါ၏ ဆိုတဲ့ စာသား နှင့်အတူ လွိုင်ကော်မြို့ ၊ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၂၉၀၀၀ ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ် ။
ပြောချင်တာကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်၊ အမြင့်ပေဘယ်လောက်ဆိုပြီး မြို့တော်တော်များများမှာ ရေး ထားတယ်ဆိုတာ တကယ်လိုအပ်လို့ ရေးသားထားတာပါ ။ အမြင့်ပေဘယ်လောက်ဆိုတာ သိဖို့အတွက် ငွေသန်းပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံ အချိန်ယူလေ့လာ Survey တိုင်းပြီးမှ ရလာတာပါ ။
နိုင်ငံတကာမှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အမြင့်ပေသိဖို့အတွက် တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာ ၊ Low Tide (ဒီရေအနိမ်ဆုံးအချိန်) ၊ Middle Tide (ဒီရေပုံမှန်အချိန်) ၊ High Tide (ဒီရေအမြင်ဆုံးအချိန်) ဒီအချိန်သုံးခုကို နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ လေ့လာတိုင်းတာပြီးမှ သတ်မှတ်ကြပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကျိုက်ခမီ ကမ်းခြေမှာ ၊ စနစ်တကျ စတင် တိုင်းတာပြီး ၊ တနိုင်ငံလုံးကို .. Level .. စက်ဖြင့် အမြင့်ပေကူးပြီး မြို့တမြို့ရဲ့ အမြင့်ပေကို သတ်မှတ် ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှဆိုရင် မြေတိုင်းဦးစီးဌာနက အမြင့်ပေ ဘယ်လောက် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ .. benchmark(BM) ..ခုံလေး တွေကို ရွေတိဂုံဘုရား နှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်း မှာ အလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါတယ် ။
တချို့တွေက ပြောကြတယ် ၊ အစိုးရကလုပ်ပေးနေတာဘဲ လူတွေကိုယ်က စည်းကမ်းမရှိတာ ။ အမှိုက်တွေ မြောင်းထဲ ပစ်ချမှတော့ မြောင်းပိတ်ပြီး ရေလျှံမှာပေ့ါ .. စသဖြင့် ကိုယ်ထင်တာ ကိုယ်ပြောကြတယ် ။
သူတို့ ပြောတာလည်း မှားတော့ မမှားပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကို ပြန်မေးခြင်တာလေးတခုက ၊ မြောင်းထဲ ပစ်ချလိုက်တဲ့ အမှိုက်တွေပြန်ဆယ်လိုက်ယုံနှင့် ရေမလျှံ တော့ဘူးလား ။ လူတွေ အမှိုက်မပစ်တော့တာနဲ့ ရေမလျှံတော့ဘူးလား ။
ဒီစကားကြောင့် တချို့တွေက ပြန်ပြောကြမယ် ၊ မင်းရူးနေလား ဘာလို့ Plan .. မရှိရမှာလည်း ဆိုရင်တော့ -
ဖြတ်သန်းသွားမယ့် မြို့နယ်တွေကို သိတော့မှ ၊ တခါထပ်ပြီး Drain ဖြတ်သန်းသွားမယ့် မြို့နယ်တွေဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပေအမှတ် ဘယ်လောက်မှာ ရှိ
တကယ်လို့များ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနက မြို့နယ်တိုင်းရဲ့တိကျတဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် အမြင့်ပေ ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ .. Elevation .. တွေပေးခဲ့ရင်တောင်မှ ၊ တကယ်တည်ဆောက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေက .. Elevation ကို follow .. မလုပ်ခဲ့ရင်၊ ရေကြီးတဲ့ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေက ဆိုဒ်တခုရဲ့၊ မြေမျက်နှာပြင်အနိမ့် အမြင့် .. Level elevation… ကို မိမိသဘောဖြင့် .. Assume .. သတ်မှတ်ပြီး
ယခုလက်ရှိ ရန်ကုန်မှာ လုပ်နေကြတဲ့ .. Construction Site .. တော်တော်များများမှာ ၊ Ground level .. မြေမျက်နှာပြင် အမြင့်ပေသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ မြေတိုင်းဦးစီးက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမြင့်ပေတွေကို .. Follow .. မလုပ်ဘဲ ၊ မိမိသဘောဖြင့်
ဥပမာ - ( အမြင့်ပေ = ၁၀၀ ) စသဖြင့် အလွယ်တကူသတ်မှတ်ပြီး လုပ်ကြပါတယ် ။
မိမိဆိုဒ်နေရာကို .. မိမိ သဘောဖြင့် အမြင့်ပေ = ၁၀၀ လို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ၊
တကယ်တမ်း မြေတိုင်းဦးစီးက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမှတ်က ၅၀ ပေ လည်းဖြစ်ခြင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ယခုလို ဆိုဒ်တခုစီက အမြင့်ပေတမျိုးစီဖြင့် ၊ အဆင်ပြေသလို လုပ်ခဲ့ ကြတဲ့အတွက် ဆိုဒ်တခုနှင့်တခု ရေမြောင်းခြင်း ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ ပြသနာ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ် ။
ဥပမာ - မိတ်ဆွေက .. လှည်းတန်းမှာ ရေမြောင်းစတူးမယ် ၊ ဆင်မလိုက် ကိုဖြတ်သွားမယ် ။ နောက်ဆုံး ကြည်မြင့်တိုင် ကိုဖြတ်သွားပြီး ၊ ရန်ကုန်မြစ်ထဲ မိတ်ဆွေ တူးခဲ့တဲ့
မိတ်ဆွေက မြောင်း စတင်လုပ်တဲ့ လှည်းတန်း မြို့နယ်ရဲ့ … Actual Ground level .. ကို၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနက ပေးထားတဲ့ အမြင့်ပေအတိုင်း မသုံးဘဲ ၊ မိမိသဘောဖြင့် .. Assume ...(အမြင့်ပေ =၁၀၀) .. သတ်မှတ်ပြီးသုံးခဲ့တယ် ။
Gradient .. ရေဆင်း အစောင်းကိုလည်း တစ်မိုင်ကို တစ်ပေနိမ် သတ်မှတ်ပြီး ၊ ဆင်မလိုက် နှင့် ကြည်မြင့်တိုင် .. ကိုဖြတ်သန်းပြီး .. ရန်ကုန်မြစ်ထဲ ကိုစီးဝင်သွားအောင်ရေမြောင်း ဖေါက်လုပ်ခဲ့ မယ်ဆိုရင် ၊သေခြာပါတယ် မိတ်ဆွေ ဖေါက်ခဲ့တယ့် မြောင်းထဲက ရေတွေ ရန်ကုန်မြစ်ထဲ စီးဝင်သွားမှာပါ ။
မိတ်ဆွေက မြေတိုင်းဦးစီးက တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပေ ဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ Actual Ground Level .. ကို Follow .. မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်၊ မြောင်းနှစ်ခုဆုံတဲ့ နေရာဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၊ အမြင့်ပေ ဘယ်လောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေ မသိ နိုင်တော့ပါဘူး ။
အကျိုးဆက်ကတော့ မြောင်းရဲ့ အတွင်းအောက်ခြေအမြင့် .. Invert level .. အနိမ်အမြင့် မတူညီတဲ့ အတွက်၊ ရေဟာ ကိုယ်သွားစေခြင်တဲ့ direction အတိုင်း မသွားနိုင်တော့ဘဲ တန့်နေပြီး ၊ မြောင်းဟာ ရေလှောင်ကန် တခုလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ။
တကယ်လို့များ ဒီလောက်က အရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီး ၊ မိတ်ဆွေက မိမိစိတ်မှန်းဖြင့် ဆက်ဖေါက်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ ၊ အခတ်မသင့်ရင် မိတ်ဆွေရဲ့ ရေမြောင်းဟာ ရန်ကုန်မြစ်ရဲ့ ( High Tide) .. ဒီရေအမြင့်ဆုံး အချိန်မှာရှိတဲ့ .. Water level .. ထက် နိမ်သွားခဲ့ မယ်ဆိုရင်တော့၊ သေခြာပါတယ် ရန်ကုန်မြစ်ထဲက ရေတွေ မိတ်ဆွေ ဖေါက်ခဲ့တဲ့ မြောင်း အတိုင်းစီးဝင်သွားပြီး ၊ မြောင်း ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက်တိုင်း ရေကြီးနိုင်တယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး ထင်တယ် ။
အံသြဖို့ကောင်းတာတခုက ၊ အမြင့်ပေ တိုင်းတာတဲ့ .. Level .. စက်တွေ သုံးနေတာတခါမှ မမြင်ခဲ့ရဘူး ။
အောက်ခြေအတွင်းက မြောင်းမျက်နှာပြင် အမြင့်ပေ … Invert Level .. က ပို အရေး
ကျွန်တော့် အကြံပြုချင်တာက ၊ တိုးပွားလာတဲ့ လူဦးရေနှင့်အတူ .. Renovation က မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အခြေအနေတခုပါ။ ဒါကြောင့်
၁။ အရင်ရှိခဲ့တဲ့ မြို့ပြ Drainage System ပေါ်မှာ System အသစ်ကို Upgrade လုပ်ဖို့ အစပျိုးသင့်ပါပြီ ။
၂။ တိုက်တာ အဆောက်အဦးတွေရဲ့ ပုံစံပြောင်းပြီး လူနေသိပ်သည်းမှုများတာကြောင့် Drain တွေရဲ့ ရေလက်ခံနိုင်မှုနဲ့ ရရှိ မိုးရေပမာဏ က မညီတော့ပါဘူး။
၃။ ရေထွက်ပေါက်ဆီထိ ရောက်ဖို့အတွက် သင့်တင့်တဲ့ အချိန်နဲ့ ရေ Volume ကို ၀င်ဆံ့မယ့် အခြေအနေ တွေ မပေးတော့ပါဘူး။
၄။ ခေတ်မှီ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ Chemical Envoriment ဖြစ်လာတာနဲ့ အညီ၊ ထွက်လာတဲ့ Drain ကရေတွေ မြစ်ထဲ တန်းစီးတာထက်စာရင်၊ Sector တွေ ခံပြီး လိုအပ်တဲ့ စစ်ထုတ်မှုတွေနဲ့ ဖြတ်စီးစေသင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခိုင်မာတဲ့ Drain System တစ်ခုကို နောင် နှစ် ၁၀၀ စီမံကိန်းလောက်ထိ တွက်ဆပြီး Development မဖြစ်မနေ စလုပ်သင့်တယ်ဟု .. ထင်မြင်ယူဆ မိပါသည်။